Bilaogy Archives - Lemur Conservation Network
Ny Lemur Conservation Network
Momban’ny Lemur Conservation Network
Ny tantara niandohanay
Mianara momba ny varika
Inona no mampiavaka ny Varika sy Madagasikara?
Zavatra 10 tokony ho fantatra momba ny varika
Asa- filatsahana an-tsitrapo
Dihin’ny varika maneran tany
Daty sy toerana misy ny fankalazana
Torolalana ho an’ny tambazotra sosialy-dihin’ny varika maneran-tany
Ireo vaovao an’ny mpikambana
Lemur Conservation Network Malagasy
Mandraisa anjara amin’ny fiarovana ny varika
Ndeha hifanampy ho fiatrehana ny vokatry ny valan’aretina Covid-19
Ny momban’ny Lemur Conservation Network
Tongasoa eto amin’ny LCN
Fitaovana fanabeazana mikasika ireo varika
Momba ny Gidro/Varika tsara ho fantatra
Toro-lalana ho an’ny fankazalana
Ireo logo sy sary ho an’ny fankalazana
Loharano ho fanabeazana
Loharano ho fizaràna traikefa
Fisy tsotra fampahafantarana ireo karazana varika
Ny Lisitra Mena an’ny IUCN sy ny satan’ireo varika eo amin’ny sehatry ny fiarovana
Ny tantaran’ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany
Ireo daty sy toerana misy ny fankalazana
Torolalana ho an’ny fankalazana virtoaly na tsy mivantana
You are here: Home › Bilaogy
Archive | Bilaogy
Fitsidihana ny alan’Anjozorobe : ahitana Varika tsy lavitra an’Antananarivo
By Diamondra Ranaivoson on May 14, 2022 in Bilaogy
Raha toa ka manana fotoana ianao ka manodidina an’ Antananarivo, dia tongava mitsidika ny Faritra arovana ao Anjozorobe, izay adiny roa sy sasany monja miala ny renivohitra raha mandeha fiara. Ny ala-javaboahary arovana na alan’Anjozorobe dia fonenan’ny karazam-borona 82 sy karazana varika 11. Mitovitovy amin’ny hita any Andasibe-Mantadia ny karazana varika hita ao, fa ny […]
Alan’i Makira: tontolo maitso mavana, voahary mirakitra harena
By Misa Rasolozaka on February 10, 2022 in Bilaogy
Fitsidihan-toerana, fitiavana nitsiry hatramin’ny fahazaza Nandranto fianarana momban’ny “primatologie” izay ianarana manokana momban’ireo primaty toy ny varika i Naina teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo, Fakiolten’ny siansa. “Efa fony kely aho no tia zava-boahary ary tao Tsimbazaza no nahitako varika voalohany tamin’izaho 9 taona” hoy i Naina. Nanomboka liana tamin’ireo varika ireo izy nanomboka teo ary te hahafantara […]
Ny faritra arovana ao Loky-Manambato, Daraina sy ireo harena ao aminy
By Faramalala Francette Vololonirina on September 24, 2021 in Bilaogy
Ny momba ahy ve? Vololonirina Faramalala no anarako ary i Rina no ahalalana ahy. Mpianatra mpikaroka avy ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo, ao amin’ny Fakiolten’ny Siansa ; sampam-pampianarana ADD na “Anthropobiologie et Développement Durable” ny tenako. Sampana iray ianarana momba ny olombelona sy ny varika ny ADD, ka tao no nandalinako ny mombamomba ireo karazam-barika misy eto […]
Fizahan-tany maitso na Ecotourisme: Ny maha zava-dehibe azy eto Madagasikara
By Diamondra Ranaivoson on July 21, 2021 in Bilaogy
Eto Madagasikara, ny fizahan-tany maitso na Ecotourisme dia ahazoan’ireto zavatra manaraka ireto tombony : na ny mpizahan-tany izany, na ny mponina eny ifotony, na ny varika sy ireo bibidia hafa. Ny fizahan-tany maitso mantsy dia manampy ny fiarovana ny natiora amin’ny alàlan’ny fanohanana ny asa fiarovana sy ny fanomezana fidiram-bola maharitra ho an’ny mponina eny […]
Fiarovana ny varika sy fitantanana ny ala ao Manombo- tetikasa ataon’i GERP
By Misa Rasolozaka on June 6, 2021 in Bilaogy
Lazalazao aminay fohifohy ny mombamomban’ny tetikasa GERP Manombo? Ny tetikasa GERP Manombo dia nitsangana ny taona 2017. Ao Manombo, Farafangana any amin’ny faritra atsimo atsinanan’ny nosy no ivon-toeran’ny tetikasa. Natsangana izy io ho fanohizana ny fiarovana ireo zavaboahary, indrindra ny Varika manodidina sy ao anatin’ny ny “Réserve Spéciale” Manombo. Tsy mitsaha-mitombo mantsy ireo tsindry mianjady […]
Ny tontolon’ny fampianarana sy fikarohana mikasika ny varika: Resaka niarahana tamin’i Dr Brigitte Raharivololona
By Faramalala Francette Vololonirina on May 26, 2021 in Bilaogy
Mba lazalazao ny mombamomban’ireo fikarohana ataonao ? Ny fikarohana nataoko nahazoana ny mari-pahaizana “doctorat” tany Hamburg, Allemagne dia mahakasika ireo katsetsitra (parasites intestinaux) izay hita any amin’ny karazana varika anisan’ny kely indrindra, mandeha amin’ny alina, antsoina amin’ny teny siantifika hoe “Microcebus murinus” na “Tsitsidy” amin’ny teny Malagasy. Anisan’ny hita tao anatin’izany fikarohana izany fa arakarakin’ny […]
Fiarovana ny varika ve? manampy amin’ny asa fivelomana maro eny ifotony
By Diamondra Ranaivoson on April 26, 2021 in Bilaogy
Rehefa tsy misy vina amintsika intsony ny maha harena ny varika dia indro entina amintsika indray ny resaka momban’ireo asa fivelomana ateraky ny fiarovana ny varika sy ny ala fonenany. Izany no atao hoe “ conservation business” na “business de conservation”! Teny Fampidirana Vao tamin’ny volana jolay 2020 no nanambara ny Vondrona Iraisam-pirenena Miaro ny […]
Ahaona no ilazàna fa manohana ny fiarovana ny bibidia ny fisian’ny fahi-bibidia na Zoos?
By Seheno Corduant on March 11, 2021 in Bilaogy
Rariny ny filazana fa ny fahi-bibidia dia tsy vitan’ny toerana fialam-boly fotsiny. Na dia antom-pisian’ny fahi-bibidia voalohany aza ny fialana voly, dia tsapa fa manan-danja betsaka amin’ny izy ireny ihany koa ankehitriny ny fanabeazana, ny fikarohana ary ny fiarovana ny bibidia. Raha resaka fiarovana ny bibidia no asian-teny, ny fahi-bibidia dia afaka mitarika asa fiarovana […]
2015-2021. Ny Lemur Conservation Network no dingana manaraka amin'ilay" Lemur Action Plan" izay tetik'asa iray amin'ny ampahany ho an'i Madagasikara ao amin'ny IUCN SSC Primate Specialist Group.
Raha te hifandray amin'ny Lemur Conservation Network.
Tsy azo ampiasaina amin'ny toerana hafa ireo sary rehetra izay nalain'ny mpaka sary matihanina eto amin'ny tranonkala raha ts ymahazo alàlana manokana.
Nanaiky ary nanome alàlana ny hametrahana azy ireo avokoa eto amin'ny tranonkala ireo fikambanana maro samihafa voatanisa ato ary miezaka ny manamarina izay voalazan'izy ireo izahay.